Mentor Match Chirongwa - International Writing Centers Association
Iyo IWCA Mentor Match Chirongwa inopa mikana yekuraira yekunyora nzvimbo nyanzvi. Chirongwa ichi chinomisikidza machisi emuperekedzi neanodzidzisa, uye vaviri ivavo vokurukura zvinangwa zvavo zvekutora chikamu muchirongwa, sarudza nzira dzakanakisa dzekuzadzisa zvinangwa izvozvo, uye kutsanangura maparamendi ehukama hwavo, kusanganisira nzira dzakakodzera dzekukurukurirana uye kuwanda kwetsamba. Nemhaka yokuti purogiramu inotora nzira isiri-dyadic, varayiridzi nevanopa mazano vanokurudzirwa kugovera ruzivo uye kudzidza kubva kune mumwe, uye nokudaro, mapoka ose anobatsirwa nehukama hwekudzidzisa.
Kukodzera uye Nguva Yenguva
Vanopa mazano uye mentees vanogona kupa huwandu hwekutsigira kune mumwe nemumwe. Vanogona:
Tauriranai kune zviwanikwa.
Batanidza nevamwe vaunoshanda navo pasi rese, munyika, uye mudunhu ravo.
Bvunza nezve kusimudzira kwehunyanzvi, kubvunzurudza chibvumirano, uye kusimudzira
Ipa mhinduro pakuongorora uye kudzidza.
Shandira semuongorori wekunze wekunyora nzvimbo yekutarisa.
Shandira sereferenzi yekusimudzira.
Shandira sachigaro pamapaneti emusangano.
Pindura mibvunzo inoda kuziva.
Ipa maonero ekunze pamusoro pemamiriro ezvinhu.
Vese nhengo dzeIWCA vanokodzera kutora chikamu muIWCA Mentor Match Chirongwa. Chirongwa ichi chinomhanya pamakore maviri, uye inotevera Mentor Match cycle ichatanga muna Gumiguru we2023. IWCA Mentor Match Co-Coordinators ichatumira ongororo kunhengo dzese dzeIWCA muna Nyamavhuvhu we2023 dzichivakoka kuti vatore chikamu muchirongwa. Ongororo iyi inobvunza mibvunzo yakati wandei nezvezvinangwa zvenhengo yeIWCA yekutora chikamu muchirongwa uye nesangano ravo. Co-Coordinators vanoongorora ruzivo urwu zvakanyatsoenderana nevanopa mazano nevanopa mazano vane zvinangwa zvakafanana uye/kana masangano. Kana Co-Coordinators vasingakwanisi kuenzanisa chipangamazano kana mudzidzisi, vachaita nepavanogona napo kutsvaga chipangamazano/mudzidzisi anokodzera, vogadzira boka revanopa mazano revatori vechikamu vasingaenzaniswi, uye/kana kuvabatanidza kune zvimwe zviwanikwa zvepanzvimbo yekunyora.
Kana iwe uchida kutora chikamu mukudyidzana kwekupa mazano kunze kwenguva yedu yemakore maviri, ndapota taura neCo-Coordinators (ona ruzivo rwekusangana pazasi) kuti udzidze kuti ndeipi mikana iripo.
"Kuva chipangamazano pachirongwa cheIWCA Mentor Match kwakandibatsira kuti ndiongorore zvakanyanya zvakaitika kwandiri, zvakatungamira kuhukama hwehunyanzvi newandaikoshesa, uye zvakandikurudzira kufunga nezvekuti kuraira kwenyanzvi kunotungamira sei pakuzivikanwa."
Maureen McBride, Yunivhesiti Nevada-Reno, Mentor 2018-19
“Kwandiri, mukana wekupa zano mumwe munhu waive nezvakanakira zvishoma. Ini ndakakwanisa kubhadhara kumberi kumwe kunoshamisa kutsigirwa kwandakawana zvisina kurongwa pamusoro pemakore. Hukama hwangu nemazano angu hunosimudzira nzvimbo yekudzidzira pamwe apo isu tese tinonzwa tichitsigirwa nebasa ratinoita. Kubata nzvimbo iyi kwakakosha chaizvo kwatiri isu tinogona kunzwa kusurukirwa kudzimba dzekumba kana mumadhipatimendi ane ruzivo. ”
Jennifer Daniel, Queens University yeCharlotte, Mentor 2018-19
Iyo IWCA Mentor Match chirongwa chinopa nhevedzano yezviitiko gore rega rega kune varairidzi uye mentees. Ndapota shanyirai IWCA Mentor Match Zviitiko Chirongwa kuti uone rondedzero yazvino yezviitiko.
Kana uine mibvunzo nezve IWCA Mentor Match Program, ndapota taura neIWCA Mentor Match Co-Coordinators Maureen McBride pa mmcbride @ unr.edu naMolly Rentscher pa molly.rentscher @ elmhurst.edu.